Apokalypsy 7 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
7 Taorian’izany, dia hitako fa nisy anjely+ efatra nijoro teo amin’ny vazan-tany efatra. Nihazona mafy ny rivotra+ efatry ny tany izy ireo, mba tsy hisy rivotra hitsoka amin’ny tany na amin’ny ranomasina na amin’ny hazo.+ 2 Ary hitako fa nisy anjely iray hafa koa niakatra avy any amin’ny fiposahan’ny masoandro,+ nanana tombo-kasen’ilay Andriamanitra velona.+ Niantsoantso mafy tamin’ireo anjely efatra navela hanimba ny tany sy ny ranomasina izy, 3 nanao hoe: “Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisinay tombo-kase+ eo amin’ny handrin’ny mpanompon’Andriamanitsika.”+ 4 Ary reko ny isan’ireo voaisy tombo-kase, dia efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy,+ voaisy tombo-kase avy tamin’ny foko+ rehetran’ny zanak’Israely:+ 5 Avy tamin’ny fokon’i Joda+ dia roa arivo sy iray alina no voaisy tombo-kase; avy tamin’ny fokon’i Robena+ roa arivo sy iray alina; avy tamin’ny fokon’i Gada+ roa arivo sy iray alina; 6 avy tamin’ny fokon’i Asera+ roa arivo sy iray alina; avy tamin’ny fokon’i Naftaly+ roa arivo sy iray alina; avy tamin’ny fokon’i Manase+ roa arivo sy iray alina; 7 avy tamin’ny fokon’i Simeona+ roa arivo sy iray alina; avy tamin’ny fokon’i Levy+ roa arivo sy iray alina; avy tamin’ny fokon’i Isakara+ roa arivo sy iray alina; 8 avy tamin’ny fokon’i Zebolona+ roa arivo sy iray alina; avy tamin’ny fokon’i Josefa+ roa arivo sy iray alina; avy tamin’ny fokon’i Benjamina+ dia roa arivo sy iray alina no voaisy tombo-kase.+ 9 Taorian’izany, dia nahita aho, ary nisy vahoaka be+ tsy tambo isaina, avy tamin’ny firenena+ sy foko sy vahoaka+ ary fiteny+ rehetra, nitsangana teo anoloan’ny seza fiandrianana+ sy teo anatrehan’ny Zanak’ondry, nanao akanjo+ fotsy lava, ary nisy sampana palmie+ teny an-tanany. 10 Niantsoantso mafy tsy an-kijanona izy ireo, nanao hoe: “Ny famonjena dia azontsika avy amin’Andriamanitsika,+ izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana,+ sy avy amin’ny Zanak’ondry.”+ 11 Ary ny anjely+ rehetra dia nijoro nanodidina ny seza fiandrianana sy ny anti-panahy+ ary ny zavamananaina efatra,+ ka niankohoka teo anoloan’ny seza fiandrianana sady nivavaka tamin’Andriamanitra,+ 12 nanao hoe: “Amena! Ho an’Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay anie ny dera sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery+ ary ny tanjaka! Amena.”+ 13 Koa hoy ny anti-panahy+ iray tamiko: “Iza moa ireo manao akanjo+ fotsy lava ireo, ary avy aiza izy ireo?” 14 Koa namaly azy avy hatrany aho hoe: “Ianao no mahalala, tompoko.” Ary hoy izy tamiko: “Ireo no avy tamin’ny fahoriana+ lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany+ tamin’ny ran’ny+ Zanak’ondry. 15 Izany no antony ijoroany eo anoloan’ny+ seza fiandrianan’Andriamanitra. Ary manao fanompoana masina+ ho azy andro aman’alina ao amin’ny tempoliny izy ireo. Ary Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana+ dia hamelatra ny tranolainy+ eo ambonin’izy ireo. 16 Tsy ho noana na hangetaheta intsony ireo, ary tsy hamely azy ny masoandro na ny hafanana mandoro,+ 17 satria ny Zanak’ondry,+ izay eo akaikin’ny seza fiandrianana, dia hiandry+ azy ireo toy ny ataon’ny mpiandry ondry, ka hitarika azy ho any amin’ny loharanon’ny ranon’aina.+ Ary hofafan’Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin’ny masony.”+